Rimwe gore mushure mokutanga kweVatal vakapindira, munyori uye vezvematongerwe enyika Aminata Traoré vanopindura "20 Minutes" kusvika kuFrench kupindira muMali neCentral Africa.
Aminata Traoré, aimbova mushumiri weMaliya uye anoramba kushandiswa kwevanhu munyika yose, yakakosha kubvira pakutanga kwekuparidzira kwaVa Serval muMali, avo vekutanga zuva rekuzvarwa musi weMugovera. Anoparidzira naBoucarcar Boris Diop Kubwinya kwevanyengeri, tsamba dzeMali neAfrica (Ed Philippe Rey) uyu weChishanu.
Iwe uri kutsvaga kupindira kweFrench kuMali uye Central Africa. Sei?
Hatisi kugadzirisa nemaoko matambudziko akabatanidzwa nehurumende yepasi rose inotungamirirwa kwemakore anopfuura makumi matatu muAfrica. Zvakakosha kudzokera kune zvakakonzera dambudziko: masangano epasi rose ekubhadhara mari, umo uFrance inobatanidzwa, haina kusimbisa Africa asi yakaderedza, kuvhara kusakosha kwemabasa uye urombo.
Pakati pemagandanga uko kunewo vanhu vaduku, pasina ramangwana. Vanowanikwa pakati pejahistist muMali kana muSeleka [kunze kwekumukira, vakapomerwa kuti vakaita hutsinye hwakaipa pamusoro pevanhu veCentral African] ...Zvinowanzonzi pakati peMali neCentral African Republic ndezvenyaya yevanyori, izvo zvinokonzera kukanganisa uye kurwisa.
MuMali, mahahadist akatyisidzira kusvika kuBamako uye akatyisa vanhu, asi muCentral African Republic hutsinye hwainge hwawedzera zvikuru. Haafaniri kupindira here?
Handidi kuvharwa mumubvunzo uyu nokuti ini handidi kutanga nemugumo wenyaya yacho. Iwe unofanirwa kushamisika kuti takawana seiko. Hondo muRibya inotungamirirwa naNicolas Sarkozy yakaderedza nzvimbo yose. Mali ndiyo nyika yekutanga yekuripa, nokuda kwekuparadzirwa kwezvombo zveLibhiya uye kupandukira kweTuareg.
France yakagadzirisa zvakashata: yaifunga kuti Touaregs yemuMariya, yaakatsigira, aizorwa neAl-Qaeda muIslamic Maghreb (AQIM), iyo inotyisa kuFrance. Asi vapanduki vakazvibatanidza neva jihadist, uye vave vakarurama veuto reMalia. France yakapindira kuti igadzirise mhirizhonga yainge yabvisa, uye tinofanira kutaura kuti maita? Kana tikasatsanangurira vanhu mhedzisiro yedambudziko, tinova nemhosva kuneFrance kuti tisunungure isu patinenge tava kutambudzwa.
François Hollande, uyo akasarudza kupindira, akawana nhaka iyi ...
Sarkozy aive nehondo yake muLibhiya, iwe wega wega ungafanira here? Francois Hollande angadai akaita zvakasiyana, pasina kutumira armada. Akati haazoendesa mauto pasi, izvo zvaasina kuremekedza. Ini ndiri mumiriri weuseriki. Apo François Hollande akasvika ini ndaifunga kuti kwaizova nhaurirano. Asi hapana chido chokuteerera kuAfrica. Vakuru vehurumende ne NGOs vanoteererwa, zvirokwazvo, asi kwete mazwi asinganzwisisiki akafanana neyangu.
Ndezvipi zvinoguma iwe unofunga kupindira muMali?
Pakutanga basa racho rakagamuchirwa. Magandanga haasisirizve muGao, Kidal uye Timbuktu. Asi ivo vakapararira. Pakave nekurwiswa mushure meOp Operation Serval: tinogona here kutaura kuti nyika yakachengetedzwa?
Iwe unobvunza zvinangwa zveFrench kupinda muMali uye muCentral African Republic ...
Isu tinotorwa nokuda kwezvidimbu: tinoudzwa "tichakudzivirira" apo France iripo nekuda kwezvaanoda. Pasi pemubatsiri, inzvimbo yehondo yekudzivirira zvido zvezvematongerwe enyika - kurwisana nehugandanga -, asiwo mafuta nemigodhi - Mali neCentral African Republic vane zvisikwa zvenyama vanochiva.
France inotarisira kuti vanhu veAfrica vanogona kuvimbisa kuchengetedza kwavo, uye vachaderedzawo vashandi vayo muMali. Uri kufara here?
Izvi handizvo zvandinofunga. Chinhu chakakosha ndechekutsanangura, uye kuti France inoremekedza vaAfrica. Hatifaniri kuita kuti Africa ive nyika yakasiyana.
Yakabvunzwa naFaustine Vincent
Iwe wapindura"Aminata Traoré inopindirana nemaitiro eFrance ..." Maminitsi mashoma apfuura
Mukadzi ane simba zvakanyanya munhoroondo yaKama
Nzvimbo yemukadzi mutema muAfrica yekare